High Pressure Polyurethane ụfụfụ spraying Machine BDF-IX - BOBO Machine Co., Ltd.
Pu ụfụfụ Machine
waya & Warara akpụ Machine
Gburugburu Pipe Machine
Waya eriri Machine
Machine Ngwá Ọrụ
Rm1808, Building 27, CBD, Nantong obodo, Jiangsu Province, China Zip:226004
Gburugburu duct Machine
Mgbanwe duct Machine
Akụkụ anọ duct Machine
Waya On tube Condenser Machine
Nku azu Type Evaporator Machine
Tube End akpụ Machine
Polyurethane Ịgba ụfụfụ Machine
Pu ụfụfụ Ọgwụ Machine
Polyurethane ụfụfụ Pourig Machine
eriri- Resin Ịgba Machine
Pu Elastomer Ife Machine
waya & Warara akpụ Mac
Waya ekwe Machine
Spring akpụ Machine
Gbọmgbọm mkpọchi Ring akpụ Machine
Steel eriri igwe Edge Protection Nkuku Machine
Corrugated Post-erughị ala Pipe Machine
Gburugburu Corruagted wụrụ kọnkịrị Pipe Machine
Metal Mgbanwe sooks Machine
Elu casing okpo mmiri Machine
Iyo Core tube Machine
Waya eriri Cutting Machine
Waya eriri Press Machine
Wheel Ma rim Machine
Igwe anaghị agba nchara Cutlery Machine
Eri Rolling Machine
Tinye :Rm1808, Building 27, CBD, Nantong obodo, Jiangsu Province, China Zip:226004
High Pressure Polyurethane ụfụfụ spraying Machine BDF-IX
nzipu okwu: EXW,FCA,FAS,FOB,CFR,CIF,CPT,CIP,DAT,DAP,DDP
Ịkwụ ụgwọ: 30% ala ugwo site T / T,itule ala n'ihu Mbupu.
Etiti oge: witin 10-35 ụbọchị ke ama ọkọbọ ala ugwo.
nkwa: n'ime otu afọ ebe ọ bụ na ụbọchị nke B / L.
BDF-IX pneumatic elu nsogbu Pu ụfụfụ spraying igwe bụ imewe maka saịtị ọrụ, n'ụzọ ziri ezi e ji atụ ihe, ọbụna agwakọta, moveable na obere Ọdịdị na itule nke na-eri na arụmọrụ. The HP ụfụfụ spraying igwe na ọtụtụ-eji n'ihi na mgbidi, ụlọ, friji, anwụrụ mkpuchi nzube.
Main ụzụ Data
agbanwe oge ikike
Max. ihe okpomọkụ
Max. Heating sooks Ogologo
na-akwọ ụgbọala Method
na ikuku Compressor
380V, 50Hz, 3adọ
(nwere ike ahaziri)
Ihe Ịnụrụ mgbapụta
1- Pneumatic moto
The pneumatic moto ịmụta ọhụrụ direction-mgbanwe abụọ direction ọrụ, ka ndị ọzọ mụ arụmọrụ tụnyere electric otu, adabara mgbagwoju anya saịtị ọrụ ọnọdụ.
2- High nkenke hà mgbapụta
Nkezi mgbapụta na-mere si igwe anaghị agba nchara, iji belata abrasion ka akàrà, ịgbatị igwe ndụ. Onwem na mmanụ tank maka DOP mgbaze eji maka nhicha ahụ scrap ihe.
3- Main igwe kpo oku usoro
Isi igwe ịmụta iche iche aluminum okpomọkụ, onwem na ike kpo oku mmanya n'ihi na mma kpo oku ike, adabara ala okpomọkụ ọrụ oyi. The okpomọkụ akara usoro na nọmba ngosi, na atụ na bufee nchedo usoro ịchịkwa okpomọkụ kpọmkwem.
4- Sooks kpo oku usoro
The abụọ sooks na-ewe iwe iche iche na ọhụrụ ọbọp n'ime kpo oku technology, ọ bụ ihe ndị ọzọ mma karịa omenala otu, iji hụ na ihe onwunwe nwere kacha mma okpomọkụ na viscidity n'ihu agwakọta na spraying.
Mpụga Mkpa polishing Machine
Rotary Beading Machine
Hydraulic akwagharị Polyurethane Perfusion Machine
Platinum Overseas Trade lnc.is ihe engineering ize,na ezi uche price egwuregwu quality ọrụ na mgbe ire engineering ọrụ